2018-03-07 03:13:59 1
Kwaze kwaba ngenkathi kushicilelwa Imibhalo Yokuhlanganyela Nokushumayela Mayelana Nokungena Empilweni 1-3. Ngenkathi ngizwa eyokuqala, ngezwa sengathi indoda eyasetshenziswa uMoya oNgcwele yakhuluma kahle kakhulu. Ngenkathi ngizwa ukuhlanganyela komunye udadewethu kwesibili (lokhu kwakungaphambi kokuba kube khona ongitshela ngokuthi lokhu kwakungukuhlanganyela kukaKristu), ngacabanga ukuthi lo dadewethu wayengumholi nje ngaphansi komlisa owayesetshenziswe uMoya oNgcwele, futhi ikakhulukazi ngenkathi ehlanganyela mayelana nenkinga yokuthi lubukwa kanjani ulwazi, angiyizwanga impendulo enomdlandla yodadewethu nabafowethu, ngakho ngaba nesiqiniseko sokuthi ngangiqagele kahle, futhi ngoba ngabona sengathi udade lo akakhulumanga kahle njengowesilisa owayesetshenziswe nguMoya oNgcwele, ngangingalalele ngokuqikelela. Emva kokuzwa umbhalo wesithathu, emva kokuhlanganyela kowesilisa owayesetshenziswe nguMoya oNgcwele, ngezwa lo dade futhi ethi, “Mayelana nokuhlanganyela komfowethu kwamanje nje…,” lapho ngaba nokuqiniseka okukhulu ukuthi lo dade wayengumholi ngaphansi kwalo wesilisa owayesetshenziswe uMoya oNgcwele, ngoba emhlabeni wethu, abaholi bakhuluma kuqala ngaso sonke isikhathi, abangaphansi kwabo bese belandela emva kwabo. Ngakho ngamcima owayekhuluma, ngicabanga ngithi, “Ngizobuye ngikulalele lokhu uma senginesikhathi.” Ngosuku engathola ngalo ukuthi udadewethu lo wayenguKristu ngathuka kakhulu, futhi ekugcineni ngalalela kanzulu izwi nezwi lentshumayelo.
Emva kwalokho, ngaqala ngacabanga ngabuka emuva: Kungani ngangilangazelela kangaka ukuzizwela ukuhlanganyela kukaKristu mathupha, kodwa uma ekugcineni esekhuluma nathi, angikwazanga ukuhlaluka? Ngaqala ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu mayelana nesimo sami, futhi ngabona ukuthi uNkulunkulu wayethi, “Bonke abantu bafisa ukubona ubuso bukaJesu bangempela futhi bafisa ukuba Naye. Ngikholwa ukuthi akukho namunye kubafowethu noma odadewethu ongathi akazimisele ukumbona noma ukuhlala noJesu. Ngaphambili kokuthi umbone uJesu, okungukuthi, ngaphambili kokubona uNkulunkulu osesimweni somuntu, uyoba nemicabango eminingi, isibonelo nje, mayelana nokubukeka kukaJesu, indlela akhuluma ngayo, indlela Yakhe yokuphila, njalo njalo. Kodwa-ke, uma sekwenzeka umbona, imicabango yakho iyoshesha ukuguquka. Kungani lokhu? Uyafisa ukwazi? Lapho ukucabanga komuntu kungeke impela kwabukelwa phansi, akubekezeleleki kakhulu ukuba umuntu aguqule ingqikithi kaKristu. Nibuka uKristu njengesidalwa esingenakufa, isazi, kodwa akekho noyedwa obuka uKristu njengophila enyameni onengqikithi yobunkulunkuku. Ngakho-ke, iningi lalabo abalangazelela ubusuku nemini ukubona uNkulunkulu yibona kanye abayizitha zikaNkulunkulu futhi abangahambisani noNkulunkulu. Ingabe lokhu akukhona ukungalungi ngasohlangothini lomuntu? Ngisho namanje nisacabanga ukuthi ukukholwa kwenu kanye nokwethembeka kunenza nifaneleke ukuba nibone ubuso bukaKristu, kodwa ngiyaninxusa ukuba nizihlomise ngezinto eziningi eziphathekayo! Ngoba esikhathini esedlule, namanje, nangesikhathi esizayo, iningi lalabo abaxhumana noKristu bahlulekile; bonke badlala indawo yabaFarisi. Ingabe iyini imbangela yokwehluleka kwenu? Isizathu esiyiso yingoba emicabangweni yenu kukhona uNkulunkulu ophakemeyo othandekayo. Kodwa iqiniso alifani nokufisa komuntu. Akukhona ukuthi uKristu akaphakeme kuphela, kepha muncanyana impela; akukhona ukuthi ungumuntu kuphela kepha ungumuntu ojwayelekile…. Ngakho-ke abantu bamthatha njengomuntu ojwayelekile; benza njengokuthanda kwabo lapho benaye futhi bakhulume amazwi anokunganaki Kuye…. Nibuka uKristu lo osewafika njengomuntu ojwayelekile nezwi Lakhe linjengelomuntu ojwayelekile. Ngakho-ke, anizange nithole lutho kuKristu kunalokho niveze ngokuphelele ububi benu ekukhanyeni” (“Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni).
Kamuva, ngabona emazwini kaNkulunkulu: “Sonke isikhathi nihlale nifuna ukubona uKristu, kepha ngiyaninxusa ukuba ningazikhukhumezi kanjalo; wonke umuntu angambona uKristu, kodwa ngithi akekho okulungele ukubona uKristu. Ngenxa yemvelo yomuntu egcwele ububi, ukuzikhukhumeza, kanye nokuhlubuka, uma ubona uKristu, imvelo yakho iyokona futhi ikugwebele ekufeni” (“Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Awuzinikele ekubhekaneni neqiniso, futhi uyalifuna iqiniso. Ufunda njengempumputhe futhi awuzinaki izinto. Uzozuzani ngokufunda kanye nokulinda kanje? Ungazithola yini ukuqondisa mathupha kukaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, ufaneleka kanjani ukuba ngufakazi ekubonakaleni kukaNkulunkulu? … Yilabo kuphela abangamukela iqiniso abangezwa izwi likaNkulunkulu, futhi yilabo bantu kuphela abafanelekile ukuba ngofakazi ekubonakaleni kukaNkulunkulu” (“Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angenza ngaqonda ukuthi angikwazanga ukuzwa izwi likaNkulunkulu ngoba ngangiphakeme kakhulu, nginomoya wokuvukela omkhulu, nokuzazisa, ukulingeka kalula ukulalelisisa nokunqekuzisa ikhanda ngivumelane nalabo abasezikhundleni nabaphezulu, kodwa ngibe ngibukela phansi labo abangenazikhundla nakubaluleka, kangangokuthi ngisho noma bekhuluma iqiniso ngingalilaleli. Ngenkathi ngilalele ukuhlanganyela ngangingagxilile eqinisweni futhi ngingenakho ukulangazelela ukuzuza iqiniso, kodwa kunalokho nganikela ingqondo yami ekucabangeni nasekuphenyeni. Angivezanga lutho ngaphandle kokuzazi nokuvukela, imicabango nemizindlo. Umuntu ozazisayo, onomoya wokuvukela, kanye nongalemukeli iqiniso njengami, umuntu ongenakuzinikela noma ukulangazelela ngaphambi kweqiniso njengami, kwakungenzeka kanjani ukuba ngizwe futhi ngazi izwi likaNkulunkulu? Ngangifaneleke kanjani ukubona uKristu?
Okwedlule: Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
Okulandelayo: Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe